Beenaale Daahir Calasaw (waagacusub.com) oo daadku qaadey kadib markii uu daan daansaday warbaahinta xortaa ee xaqiiqada tatbisa. War Deg Deg ah: Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin oo Jihooyin kala gedisan kasoo galay magaalada Dhoobleey iyo Gaadiid ay ka carareen Maleeshiyadii Axmed Madoobe oo laga heley Howdka Dhoobleey. SomaliMeMo oo heshay shax Milateri oo ay dejisay AMISOM si ay ugu qabsato magaalada Muqdisho iyo ciidamo taabacsan DKMG-ka oo si qarsoodi ah ku jooga deegaanada ay Mujaahidiintu ka maamulaan magaalada Muqdisho.(Warbixin dheer oo Xasaasi ah).	Mu'assasada Al-Kataaib oo soo saartay filim cusub oo heer sare ah kana waramaya dagaalladii ugu dambeeyay Muqdisho. Amiirka Mujaahidiinta Al-shabaab Sh.Mukhtaar Abu-Zubayr Allaah Dhowree oo ka hadley Somaliland.	Jamaacada Ictisaam iyo Jalaafaynta Jihaadka.(Tariikhda Madaw ee Ictisaam). Sheikh Cumar Faaruuq Shalay Iyo Maantay Iyo C/laahi Yusuf Iyo Sheikh Sharif (Dhagayso)	Amiirka Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa fariin soo diray oo kaga hadlaayo qaraxyadii barakaysnaa ee ka dhacay magaalada kampala ee dalka uganda.(DHAGAYSO)	Sh.Usama”Cadaalada ka mid ma’ahan in Ameerikaanku ku Noolaadaan Baraare iyada oo ay Walaalaheena Gaza ku jiraan Nolol Rafaad badan”.	Xarakatu shabaabul mujaahidiin oo faahfaahisay camaliyadii Istish-haadiga ee Lagu Halaagay Saliibiyiinta AMISOM (DAAWO SAWIRADA)	Sh.Usama”Cadaalada ka mid ma’ahan in Ameerikaanku ku Noolaadaan Baraare iyada oo ay Walaalaheena Gaza ku jiraan Nolol Rafaad badan”.
Posted on January 25, 2010 by halganka	Chanalka Al-jazeera ayaa Baahiyay Maanta oo Axad ahi Cajal Maqal ah oo uu soo Diray Hogaamiyaha Ururka Al-Qaacidda Sheekh Usaama Bin Laadin, wuxuuna Cajalkaasi ku sheegtay inay iyagu ka danbeeyeen Weerarkii Diyaradeed ee 25 December lala damacsanaa in lala beegsado Maraykanka. Fariintani ayaa si gaar ahi ugu socotay Madaxweynaha Maraykanka,” ka socoto Usaama ku socoto Madaxweynaha Maraykanka Obama”.
Filed under: Uncategorized « Faah faahin buuxda oo ku aadan dagaalkii Baladweyne, Halka la kala joogo, khidadii dagaalka iyo hub laga soo fagayo Hotel Hiiraan ee Baladweyne. Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa shalay galab maamul cusub u magacawday gobolka Galgaduud ee bartamaha Dalka Soomaaliya. »